Mogadishu Journal » Messi oo guursaday saaxibtii
Xiddiga kubadda cagta ee u dhashay dalka Argentina, Lionel Messi, ayaa guursaday saaxiibtii ay sanadaha badan wada socdeen, Antonela Roccuzzo, waxaana arooskooda uu ka dhacay magaalada ay kasoo jeedaan ee Rosario.
Xafladaasi ayaa waxaa ka qeybgalay rag magac ku leh kubadda cagta oo ay ka mid yihiin laacibiinta ay Barcelona ka wada tirsan yihiin ee Luis Suarez iyo Neymar.
Messi iyo Roccuzzo ayaa isu haya laba canug, waxaana ay isbarteen Messi oo 13 jir ah, ka hor inta aanu Barcelona ka billaabin xirfadiisa kubadda cagta.
Qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaa u daawasho tagay xafladda ka dhacday Rosario oo qiyaastii 300 oo kilo mitir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Buenos Aires.
Laacibiinta kale ee ka qeybgalay arooska ayaa waxaa ka mid ah Fabregas, Di Maria, Piqué iyo xaaskiisa Shakira.
Magacaabista gollaha wasiirada oo dib u dhac ku yimid